काठमाडौवाट विभिन्न जिल्लामा जाने लामो दुरीको यात्रामा भाडा कति लाग्छ ? विभागले जारी गर्यो नयाँ भाडा दर « Gaunbeshi
काठमाडौवाट विभिन्न जिल्लामा जाने लामो दुरीको यात्रामा भाडा कति लाग्छ ? विभागले जारी गर्यो नयाँ भाडा दर
काठमाडौं । सरकारले लामो दुरीको सवारी यातायातको भाडाको नयाँ दर कायम गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातमा वृद्धि गरेको नयाँ भाडादर सार्वजनिक गरेको हो । अन्तरप्रदेश रुटमा चल्ल्ने नयाँ भाडा दर केही वृद्धि भएको छ ।
२०७८ असार २७ गते तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भाडा बढाउने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार भाडा वृद्धि गरी सार्वजनिक गरिएको छ ।
विभागले दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश भई सञ्चालन हुने ९राष्ट्रिय स्तरका सार्वजनिक यातातात रुटमा सञ्चालन हुने० सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारी साधनको भाडादर २८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको जनाएको छ ।
विभागले पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधनमा २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधानमा २६ प्रतिशतले भाडा बढाएको हो । विभागले काठमाडौँदेखि नेपालगञ्जसम्मको नयाँ भाडादर १ हजार २८६ रुपैयाँ कायम गरेको छ । काठमाडौदेखि पोखराको लागि १ सय ९ रुपैयाँ भाडा बढाएको छ । विभागले साविकको भाडा ४ सय २८ रुपैयाँबाट ५ सय ३७ रुपैयाँ कायम गरेको हो ।
यस्तै, विभागले काठमाडौँदेखि भद्रपुरका लागि १ हजार १७२ रुपैयाँबाट १ हजार ४७० रुपैयाँ, काठमाडौँदेखि भैरहवाका लागि ५ सय ६१ रुपैयाँबाट ७ सय ४, काठमाडौँदेखि महेन्द्रनगरका लागि १ हजार ३३२ रुपैयाँबाट १ हजार ६७१ रुपैयाँ, काठमाडौँदेखि विरगंजका लागि ५ सय ४० रुपैयाँबाट ६ सय ७८ रुपैयाँ भाडादर कायम गरेको छ ।
विभागले तराईको लामो दुरी ९२५० किलोमिटर भन्दा बढी० पक्की र ग्राभेल बाटोमा सञ्चालन हुने यात्रुबाहक बस, मिनिबसको लागि प्रति किलो मिटर प्रति व्यक्ति २ रुपैयाँ ४३ पैसा कायम गरेको छ ।
२५ किलोमिटरदेखि २५० किलोमटिटरसम्म दूरीका पक्की र ग्राभेल बाटोमा सञ्चालन हुने यात्रु बाहक बस, मिनिबसको लागि प्रति किलोमिटर प्रति व्यक्ति २ रुपैयाँ ४९ पैसा र काठमाडौँ–पोखरा र पोखरा–नारायणघाट ख०डको लासग प्रति व्यक्ति प्रति मिलोमिटर २ रुपैयाँ ६७ पैसा कायम गरेको छ ।